ग्याजेट र स्वास्थ : कुन अंगमा कस्तो असर ? - Parichay Network
ग्याजेट र स्वास्थ : कुन अंगमा कस्तो असर ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ९ माघ २०७६, बिहीबार ०९:४१ मा प्रकाशित
सूचना तथा प्रबिधिको युगमा मानिसहरु विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग विना दैनिकी चलाउन गाह्रो मानिरहेका छन् । एकतर्फ यसले मानिसको जीवनशैली बदलिएको छ। भने कामलाई छरितो बनाईदिएको छ ।
मानिसहरु काम छरितो भयो भनेर दंग छन् । यसको अर्को पाटो उनीहरुको स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने बारेमा भने वेखबर छन् । ग्याजेटले मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर परिरहेको छ त ?
गर्धन र काँध
औंला, नाडी र जोर्नीहरु
रोड ट्राफिक दुर्घटनाका धेरै कारणमध्ये महत्वपूर्ण कारण विचलित ड्राइभिङ पनि हो। विचलित ड्राइभिङको पहिलो कारक तत्व मोबाइल फोन हो। सवारी चलाउँदा हातले पक्रेर फोन सुन्दा, म्यासेज पठाउँदा, अडियो भिडियो सुन्दा÷हेर्दा वा गेम खेल्दा चालकको ध्यान विचलित हुने हुँदा यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। विभिन्न अध्ययनले दर्शाएअनुरुप चालकले वाहन चलाउँदाका बखत मोबाइल चलाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना ३र४ गुणाले बढेर जान्छ।
शरीरमा राखिएका उपकरणलाई दखल
यी विद्युतीय उपकरणको अति प्रयोगले व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिसँग दूरी बढाएको, परिवार र समाजसँग पनि दूरी बढाएको छ। फलतः मान्छे आज असामाजिक बन्दै गइरहेको छ।